peturu Drilling CMC & Pac - China Shandong Yulong Cellulose
chikafu mugwaro yavaibvisa carboxymethyl cellulose (CMC)
karusiyamu carboxymethyl cellulose (CMCCa)
microcrystalline cellulose Colloid (MCCGEL)
croscarmellose yavaibvisa (CCNa)
peturu Drilling CMC & Pac
mamwe maindasitiri kushandiswa CMC
mushonga wemazino Industry
peturu Drilling CMC & Pac CMC uye Pac azivikanwe kushandiswa peturu kuchera mumunda. Ainyanya somunhu viscosifier, rheology kudzora mumiririri uye Urume kurasikirwa mumiririri kushandiswa kuchera mvura, pamwe simba mano kuturika, akatakura kuchera kucheka zvinobudirira, kudzivirira rusvingo Houses to Rent, kudzivisa kurasikirwa madhaka, achidzivirira chibooreso uye rive dete ukobvu mumadhaka keke; It rakakodzera nokuti mvura yakachena, mvura gungwa uye zvine munyu mvura dope mukuru goho zvazvingava, zvakanaka alkali nemishonga uye simba antibacterial ...
CMC uye Pac azivikanwe kushandiswa peturu kuchera mumunda. Ainyanya somunhu viscosifier, rheology kudzora mumiririri uye Urume kurasikirwa mumiririri kushandiswa kuchera mvura, pamwe simba mano kuturika, akatakura kuchera kucheka zvinobudirira, kudzivirira rusvingo Houses to Rent, kudzivisa kurasikirwa madhaka, achidzivirira chibooreso uye rive dete ukobvu mumadhaka keke; It rakakodzera nokuti mvura yakachena, mvura gungwa uye zvine munyu mvura dope mukuru goho zvazvingava, zvakanaka alkali nemishonga uye simba antibacterial zvivako. Rine zvakanaka chafariz isimbe, uye vanongogona zvinobudirira kuderedza kurasikirwa mvura panguva tembiricha pamusoro 150 ℃.
In okuguma fluid kunyanya nayo anodzora viscosity kuti fluid unorembedza uremu, anotakura filler uye kudzivisa mvura mvura kurasikirwa.
High viscosity CMC inogona kushandiswa iri fracturing fluid nokukurumidza kuvandudza viscosity kuti fracturing fluid zvinobudirira takura proppant kupinda mafuta zvakanaka kutsemuka kumisa seepage migero, nokukurumidza kuderedza uwandu Urume kurasikirwa, simuka paumbwe kufurirwa nokukurumidza kuti vabudirire nyatsoshanda kuchinjwa kumanikidzwa, kuti chigadzirwa pasina vakasara uye hapana kukuvara inotungamirwa.
Oil Drilling Urume zvigadzirwa: CMC-HV, CMC-? Lv, Pac-? Lv , Pac-R , Pac-HV
Fracturing Urume zvinogadzirwa: GFH6000
The zvigadzirwa unotevera GB / T 5005, API 13a, OCMA nemitemo.
Previous: Cheap price Mosquito Grade Cmc - calcium carboxymethyl cellulose （CMCCa） – Yulong Cellulose
Next: croscarmellose yavaibvisa (CCNa)
Pac Hv For Oil Drilling Grade Pac Manufacturers-China
Pac Oil Drilling Grade
Phone: + 86-539-8322663